Manampy anao hahazo lanja ve ny G FUEL? - Fanazaran-Tena
Tena > Fanazaran-Tena > G fihenan'ny vidin'ny solika - vahaolana azo tanterahina
G fihenan'ny vidin'ny solika - vahaolana azo tanterahina
Manampy anao hahazo lanja ve ny G FUEL?
Kaloria: 10 ka hatramin'ny 25
Hisy kaloria tafahoatramahatonga anaonymahazo lanja, ary ny tsy fahampian'ny kaloriamahatonga anaonymampihena lanja. Miaraka amin'ny kaloria 10 ka hatramin'ny 25 fotsiny (miankina amin'ny tsironyianareomividy), mandanyG FIASAtsy hanova tanteraka ny tanjon'ny fihinanana isan'androianareomety manana.
Inona no mitranga ry zalahy? Jeff Cavaliere, Athlea-X.com. Androany aho dia hanampy anao hahita raha mety aminao ny famenon-tsakafo.
Ny famenon-tsakafo dia tsy ho an'ny rehetra, fa afaka manontany tena amin'ny andiam-panontaniana ianao hamantarana raha kandidà ianao na tsia. Manomboka eto amin'ny 'eny' na 'tsia' misy anao izay ifandraisanao manomboka. Ianao ve vao manomboka? Tena bandy mahia ve ianao nefa tsy mbola nanainga lanja tamin'ny fiainanao? Hevero fa iza no mahalala olona toa izao? Ataoko! Tena izany mihitsy aho. Raha ny marina, ity no dumbbell voalohany nataoko.
Hitanao eo io; Ity no dimy kilao. Ity fivelezana dimy ity dia namela ahy hampiakatra mavesatra mavesatra kokoa, saingy nanomboka izany aho. Raha ny marina, rehefa nihalehibe aho dia nilaza tamiko ny rahalahiko hoe: 'Mila mahazo ny marina ianao, mendrika io tombontsoa io. hanombohana mihinana famenon-tsakafo. 'Satria raha vao manomboka amin'ny lanjany maivana tokoa ianao ary tsy dia matotra loatra ny fampihetseham-batanao dia be loatra ny famenony.
Aleo lavitra mahita ireo fotony sy fahatakarana ny fomba fananganana ny vatanao amin'ny rangotra. Ianaro ny fihetsika mety, ny fomba fanatanjahan-tena mety, ary ny fomba fampifanarahana azy rehetra alohan'ny hanadiovana azy amin'ny famenon-tsakafo. Amin'ny lafiny iray hafa, ary mitovy hevitra aminy, raha toa ianao ka karazan'olona mamela ny tenanao tsy hanana endrika mahomby - tavy 40% amin'ny vatana na mihoatra noho ny fahazaran-dratsy mihinana anao - manandrana manamboatra Izy ireo miaraka amin'ny famenon-tsakafo dia tsy The The Right Path Ianao dia ao amin'ny faritra izay, raha nanolo-tena hanamboatra endrika ianao dia efa nidina an'ity lalana ity nandritra ny fotoana kelikely ary te hitondra azy amin'ny ambaratonga manaraka.
Avy eo ianao dia ho 'eny'. Raha tsy izany, raha manomboka manao ny iray amin'ireo mahery indrindra ianao dia hijanona eto ho 'tsia'. Ity misy scenario iray izay mety hifandraisan'ny maro aminareo, saingy miaina sy miaina izany isan'andro aho izao dia ny fihenjanana be.
Tsy voatery ho adin-tsaina ratsy. Mety ho adin-tsaina tsara izany. Raha ny amiko dia Stress tsara.
Niteraka zazalahy kambana izahay. Tonga aloha izy ireo. Mampihetsi-po izany, saingy izahay “Miezaka ny hampivoatra sy hivoatra ary hahatratra ny toerana misy azy ireo aho.
Nanindry mafy ny fiainako izany, nefa ahoana? Mbola hanao fanatanjahan-tena aho, mbola hiezaka ny hihinana izay tsara indrindra azoko atao, fa rehefa niresaka momba ny andro hafa aho tao amin'ny lahatsoratro momba ny sakafo izay nanehoako anao ny fomba fohy ahafahako manao sakafo be dia be indray mandeha - tena hampifandray tokoa aho ity eto, raha mbola tsy nahita an'ity ianao - dia mbola eo amin'ny fiainako izao ny stre ss. Ny fanampiana dia afaka manampy anao handresy ny adin-tsaina satria afaka manao zavatra roa izy. Laharana voalohany: Fantatsika fa ny fihinanana sakafo dia mety ho ampahany lehibe amin'ny famatsiana ny vatanao amin'ny lasantsy ilainy hanohizany miatrika fihenjanana, ary fantatray koa fa tsy voatery manana fotoana mandritra ny fotoan-tsarotra isika amin'ny fanomanana izany .
Noho izany ny famenon-tsakafo dia ho mora dia mora ny miomana ary mamela anao hifanaraka amin'ny sakafonao. Ka ho ahy dia mbola tsy niankina tamin'ny fanampin-tsakafo mihoatra noho izao aho, satria tsy any amin'ny toerana ahafahako misakafo tsara foana. Tsy ny trano fisakafoanana any amin'ny hopitaly no toerana tsara indrindra ahazoako sakafo ara-dalàna, fa raha afaka afangaro hohozongozonina aho dia ento miaraka amiko, ary ankehitriny manana sakafo mahavelom-bolo indrindra aho rehefa ilaiko izany; vao maika lasa maika.
Holazaiko fa raha miasa amin'ny adin-tsaina be ianao na ao anatin'ny toe-javatra mampiady saina be ary tsy te hiala amin'ny sakafo fihinanao ianao ary mbola te-ho afaka manao fanatanjahan-tena ary ianao Raha mametraka fihenjanana be amin'ny vatanao ianao, At Ity teboka ity dia alao antoka fa manome antoka ianao fa hampiditra endrika famenon-tsakafo mba hahafahan'ny vatanao sitrana haingana be kokoa ary afaka sitrana tsara kokoa ianao. Eny ary, ny manaraka dia raha ny marina, fanontanian'olona iray, ampidiniko io, ento eto, ary entiko lehilahy ianao ary mangataka aminao mba hanao ny marina amin'ny tenanao. Ianao ve ilay karazan'olona mandray ny famenonao ary avy eo mihinana sakafo mangatsiaka satria noheverinao fa efa nanao? Inona no tokony hataonao? Raha ianao ity dia tsy ho anao ny fanampin-tsakafo, okay? Tsy natao ho anao izy ireo.
Saingy misy teboka iray lehibe azonao ianarana avy amin'izany rehetra izany. Izany hoe, ny famenon-tsakafo indraindray dia mahatonga ny olona ho tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ny zavatra sisa ataony, mivoaka ianao ary mandany ny volanao rehetra amin'ny famenonao ary raisinao am-pinoana izy ireo, raisinao tsy tapaka izy ireo, manana fotoana mety hikorontana ianao avy eo ary manao izay fantatrao fa tsy tokony hatao, mba hifanaraka amin'izay tianao hatao amin'ny vatanao. Hanjary hahafantatra bebe kokoa ianao rehefa fantatrao fa be ny vola laninao amin'ny famenonao, ny asa mafy ataonao ao amin'ny gym, ary ny fotoana sy ny ezaka ataonao amin'ny fanaovana izay fantatrao fa tokony hataonao.
Tsy dia miala amin'ny lalana nokapohina izay fantatrao fa tsy tokony hatao ianao. Eto no mety hanan-danja lehibe ny fanampiana, mitazona anao ho tompon'andraikitra amin'ny fihetsika rehetra mihoatra ny fotoana itondranao ny famenonao. Afaka mandray fanampin-tsakafo ny olona rehetra.
Io no zavatra mora indrindra azonao atao. Izany no antony ahazoana olona be dia be toa azy ireo. Fantatsika rehetra fa mora ny mampifangaro zavatra sy misotro azy, fa izany rehetra izany dia mitranga mandritra ny ora sy minitra hafa manodidina ny t. Manisa ny fotoana itondranao ny famenonao.
Raha mahatonga anao ho tompon'andraikitra bebe kokoa izany dia heveriko fa tokony ho ao anatin'ny drafitrao izy ireo. Indrindra raha toa ianao ka karazan'olona toy izany. Okay, ny fanontaniana manaraka tianao hapetraka amin'ny tenanao dia ny hoe tsy atleta ianao na tsia.
Rehefa miteny aho hoe 'atleta' dia tsy voatery ho atleta matihanina no dikaniko. Raha ny marina dia manana olona marobe eto izahay miofana amin'ity fantsona ity mba ho lasa sporty. Fa raha mpanao fanatanjahan-tena ianao dia aleo manomboka matotra ny famenonao.
Raha tsy manao izany ianao dia azoko lazaina aminao fa avela any aoriana ianao. Vao avy niverina aho tamin'ny fivoriana ririnina lasa teo tany Nashville, Tennessee. Ny matanjaka ligin'ny ligy sy ny mpanazatra dia fanampiny.
Andao hatrehana izany, ny lalao baseball dia nahita fiovana matotra tato anatin'ny taona vitsivitsy mba hamoahana zava-mahadomelina amin'ny lalao. Nisy sombiny lehibe amin'ny fomba fanomanan'ny mpilalao isan-taona, saingy tsy eo izany. Tsy mandeha intsony izao.
Tokony ho afaka hanao izany ianao amin'ny alàlan'ny fikarohana marina sy marim-pototra ary fanampiana miorina amin'ny porofo manolo izany mba hahafahan'izy ireo mitondra ny lalao any amin'ny sehatra manaraka. Izay tsy manao dia ho diso aoriana. Toy izany koa no azo lazaina eto.
Averina indray ho an'ireo izay te-handray tsy ny zava-bitany ihany fa ny vatany koa amin'ny dingana manaraka. Efa nanolo-tena ianao, efa eo amin'io làlana io ary te hitondra azy amin'ny ambaratonga manaraka; Ireo no bandy mila manomboka mikaroka ny tombotsoan'ny famenony. Farany, hilalao marina kely na diso isika eto.
Hanontany anao fanontaniana iray aho ary tiako hovalianao ny lafy izay eritreretinao, mieritreritra ve ianao fa afaka mahazo ny tombo-tsoa fanampiny ho anao amin'ny sakafo irery? Tsy mila famenon-tsakafo ianao raha te hahazo ny tombony amin'ny zavatra tianao hanandramana famenon-tsakafo. Homeko anao eto iray segondra. Eny, azoko atao ny mampitsahatra ny fihenjanana ankehitriny satria 'diso' mafy ny valiny.
Homeko anao ohatra roa amin'izany. Rehefa manandrana mandray fanampim-panafody ny olona, ​​dia andao lazaina fa mihinana glucosamine, ilay raika iraisana izy ireo, ary mandray glucosamine; Niady hevitra ny olona fa afaka mahazo ny glukosamine ho azony amin'ny mekanika Athlean antsika. Avy aiza izany? Ao amin'ny trano fisakafoanana ve ianao izay manafatra surf sy turf ary miteny amin'izy ireo mba hihazonana hena lobster ary omena anao fotsiny ny vilia? Tena tsara ve ny tsirony? Inona no nohaninao mba hahazoana ny glukosamine ilainao hanararaotana ireo fanampiana fanampiny? Mila mandray raikipohy iray daholo ve izy rehetra izao? Tsia, fa raha milaza amiko ianao fa mahazatra dia raiso ny raikipohy, na te hanararaotra ny glucosamine amin'ny endrika mahazatra ianao, saingy tsy mila ilay fampiasa mahazatra ianao dia mamita-tena.
Milalao ny lalao tsy voajanahary ianao ary tsy tena manampy izay azonao lazaina momba ny zavaboary, iray amin'ireo fanampiana efa voadinika tsara any. Tsy misy isalasalana fa ny mpikaroka dia manana fikarohana be dia be ao ambadika izay manohana ny fahombiazany ho an'izay rehetra miasa. Mahazo ny mpamorona anao ve ianao? an'ny? Mandre foana aho, 'Jeff, afaka mahazo kôline amin'ny hena ianao.
Jeff, azonao atao ny mahazo ny creatine amin'ny tuna. 'Andao horaisintsika ho ohatra lavorary ny tonony. Ny Tuna dia manana mpamorona 4,5 grama isaky ny vita - Tuna 16 ons.
Tuna iray kilao izany, okay? 4,5 grama ny mpamorona dia tsara. Dosis tsara ho anao izany, nefa manantena inona? Fantatrao - rehefa mahalala zavatra momba ny zavaboary ianao - fa raha te hahazo ny tombony eto dia tsy maintsy raisinao isan'andro.
fotoana fisakafoanana sy fihenan'ny lanja
Midika izany fa mila mandany tuna 16 isan'andro ianao. Midika izany fa ny teti-bolanao dia mila manome anao safidy hividianana ondratra 16 - izay mitovy amin'ny 1 pounds - tuna manodidina ny $ 17. $ 25 iray kilao, arakaraka ny kalitaon'ny sushi na tsia, isan'andro.
Raha manomboka mieritreritra izay ho volanao isam-bolana isika - angamba manodidina ny $ 500 - hahazoana ny mpamorona anao, misy dikany ve izany? Tsy lazaina intsony, mety hiafara amin'ny fanapoizinana merkiora ianao eny am-pandehanana. Tsy dia toa fomba tena mahomby hahazoana creatine izany. Mila ny tsirairay ve? Creatine? Tsia! Tsy milaza aho fa nanao izy rehetra, fa aza manantona ahy ary miteny hoe: 'Jeff, te-handray ny tombony azo avy amin'ny kôline aho ary hahazo izany amin'ny alàlan'ny sakafo ara-dalàna sy amin'ny sakafo nohaniko. 'Tsy hitranga izany.
Hadisoana lehibe koa. ' Raha tadiavinao ny tombontsoa azo avy amin'ny akora sasany mba hanana tombony ergogenika dia ny fahazoanao tsara kokoa fa mety mila mandray fanampin-tsakafo eto koa ianao. Raha tsy manaraka ireo tombontsoa fitadiavana ireo ianao dia tsy voatery mila izany.
Araka ny nolazaiko tany am-piandohana, raha toa ianao ka karazan'olona mandray ny famenonao ary mieritreritra hoe: 'Izay', rehefa vita izany rehetra izany dia mivoaka ny asa mafy rehetra ary mieritreritra ianao fa ny suplementaire dia soloina ny fiasana mafy; fantatrao izay - manasoa ahy, aza raisina ny famenon-tsampiko satria tehamaina ny tarehy. Heveriko fa ny famenon-tsakafo dia ny valiny ho an'ny rehetra, saingy heveriko fa ny ankamaroan'ny olona manaraka ity fantsona ity sy manaraka ny torohevitra omeko anao eto dia somary matotra kokoa amin'ny fianarany. Ny famenon-tsakafo dia mety ho zavatra mety hoeritreretinao raha mitady ny hitondra ny valiny amin'ny dingana manaraka ianao.
Manana ny mpamenony izahay ry havana. Hijery azy ireo isan'andro aho isaky ny manamboatra lahatsoratra eto aho. Manana lahatsoratra izahay.
Mandritra izany fotoana izany, raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity, na farafaharatsiny mamelombelona, ​​azafady mba miangavy anao aho ary avelao eto ambany ny fanehoan-kevitrao sy ny ankihibe. Ampahafantaro ahy izany. Lazao amiko hoe inona koa no tokony hotateriko eto amin'ity fantsona ity.
Angamba zavatra mifandraika amin'ny famenony, fa hiezaka mafy aho hanao izany eto mandritra ny herinandro ho avy. Tsara daholo ry zalahy. Hiresaka aminao indray aho tsy ho ela.
Salama ve ny solika G?
Eny!G FIASAmiasa tsara, itokisan'ny olona amin'ny sehatra rehetra amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Mpiady UFC, atleta eSports, mpanao trano, skateboarder, kintan'ny YouTube, maodelim-pahasalamana ary na ny mpilalao NFL aza dia samy matoky ny rehetraara-pahasalamanaangovo, fifantohana ary fiaretana aoG FIASA!
saingy nitovy tamin'ny doodoo androany isika hanandrana zava-pisotro misy herinaratra gamer kely tahaka ny kafe toa ahy oh oh oh manana fandeferana avo dia avo amin'ny kafe aho satria miverina any amin'ny dadany mankany amin'ny kafe aho 'I mividiana ireo goavam-be feno kapoaka lehibe an'ny FC ary milalao Counter-Strike aho raha tsy mila ny loharano ialalanao fantatrao fa te hitehaka aho dia tena miantehitra amin'ireo zava-pisotro misy herinaratra oktana avo lenta mba hampiala ahy ny andro any amin'ny oniversite nampiasako. Misotro be dia be isan'andro ny angovo mahery vaika. Mangatsiaka ny fiara mifono angovo, saingy manana angovo bebe kokoa hilalaovana lalao izy ireo, amin'ny 4:00 maraina, eo am-pandriana ianao, fantatsika rehetra fa zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Death ny torimaso. noho izany dia tokony handany fotoana bebe kokoa amin'ny filalaovana lahatsoratra lalao an-tserasera koa aho, zazakely, arahaba tsara fa manana gummiserst isika trondro swisish jerris matanjaka be izany olana izany no fantatrao ny fahatsapako fa afaka mandalo ny rafiko ary manome ahy shit mafy mila zavatra bibidia aho dia ny mifanohitra amin'izay no tsy mila topoop aho mba hahafahako milalao bebe kokoa fa tena mety izany raha ny resaka t aste ny trondro soedoa eny ny tiako holazaina dia hoe tsy mankafy serizy mahafinaritra fotsiny izy ireo fa toa ilay rubber vita amin'ny waxy no napetraka eny, toy ny savoka ilay izy, ampy an'ity tovolahy ity toa ny kool manampy ahy tiako io tiako io ary ahoana ny fahatsapanao? momba ny trondro candyswedish izay tiako ny trondro swedish fantatrao fa kilasika aho ka tena mihinana trondro betsaka araka izay azo atao aho satria ranoka ity no ampiasaiko mymoistyscale ary homeko ireo fampiononana lena efatra ireo izay iza no manaraka fa manana biohock metabolisma isika biohock ahy tiako ity lalao ity tsy misy loko artifisialy Tsy afa-po aho amin'ny ankapobeny rano io dia toa fofona toa ny masoandro Capri na zavatra toa izany eny te-hiteny aho hoe toa ny fisotrony ny vahiny fa tsy manitra tsy manitra fa heveriko fa tena matsiro tokoa tapaka ny lelako ny tsirony dia tena tsara, fantatrao, ity no zavatra tiako kokoa hamafana satria fipoahana tsiro mahery io, eny, ity iray homeko telo amin'ny dimy ity dia omeko azy telo avy amin'ny dimy fotsiny , ary apetrako eo ambanin'izy ireo izany ny solika G, eny ny solika G voalohany izay milaza fa ny lalao Bioshock BioLife dia toy ny roa, ahoana no ahafahan'izy ireo milaza izany, tsy afaka milaza izy ireo fa mbola afaka mahatsapa sy mahatsapa an'izany amin'ny vavako aho , eny, tsapako fa mbola eo amin'ny lelako io, Idon aho don tsy tiako izany manaraka ianao respawnand dia paoma maitso izy ary zava-pisotro fisotroana an-tsaina afangaro ny boaty mmm izay hareza hareza ka ny hareza an'ny orinasa izay toy ny kojakoja amin'ny solosaina dia manome zava-pisotro misy alikaola ho an'ny mpilalao izay loko halako ary malahelo aho ho an'ny lollipop tanora miaraka amin'ny karamela ivelany ary misy paoma maitso eo afovoany, tsara ireo izay maharikoriko an'i Ismell eto fa misy tsirony paompy mahery vaika kokoa an'ny paoma teratany ka manandrana karazana Krismasy amin'ny zavatra maharikoriko tokoa izay mahafinaritra tiako be dia be izay tena tsara tsia tsy eny eny eny, mankahala aho ry zalahy tsara isa voalohany ho an'i meyeah homeko laharana anao any ambany ianao izao mahazo 1 avy amin'ny 5 manaraka ho ahy na dia iray aza izy 2 ratsy izany no ambany indrindra ho an'ny sakafo G solika bioshock fisotroana hareza tsy tiako fa tsy mpankafy aho oh f PS lupus lupus lupus izay hamakivaky ny vavako toa zazakely aloha loatra dia tena niorim-paka tamin'ity iray ity aho satria tena apokaliptika sy mangatsiatsiaka ary andraso ratsy fa faly aho d oh tena nampahatsiaro hafahafa ny vavako iray manontolo izao rehefa mahatsapa fa maina izahay olona samy hafa be fa tsy nanandrana doodoo tsia dia rehefa nanana kliobako alina aho tsia tsia dia manandrana mamely trano hos aho amin'ny 4:45 maraina tokony haharitra farafaharatsiny hatramin'ny 10 maraina
Jesosy eny tsia tsia izay mahatsapa fa mandeha nefa tsy manandrana faran'izay lehibe ve tsy ratsy fa matotra ianao fa tena tsy misotro ny zava-drehetra tena midika izany fa tena matotra fa inona no ataonao fa tsia tsia fps sy hareza mmmOh G ary avy eo ao amin'ny Tip Still G-Fuel, fantatrao fa Gemini aho ary matetika tsy miombon-kevitra amin'ny lehilahy, fa raha miaraka amiko izy anio dia G-Fuel Bioshock FPSrespawn Tsy mety milavo lefitra amin'ny paoma maintso, isa famerenanana tsara iray sy faharoa kosa ny g-solika manandrana toy ny kool-aid tonga lafatra eo ambaniny bioshock dia tia an'ity lalao ity ity zavatra ity apetrako eo amin'ny tany raha tsara izany ka izay no mandeha, izany ny lalao ando ando an-tendrombohitra tiako ny KN Mountain Dew amp tsy maintsy andramantsika izany, mahafatifaty tokoa ity nataoko ity Farany, ity no kilalao tadidio tsara fa izay manana gazy karbaona dia mety aloha yeah eny oh aloha fa tsy karbonika ny trano fonenako dia ny trano fonenanao kely - tadidiko fa nitovy tamin'ny crispy kokoa fantatrao aho fa heveriko ho halako ity iray ity - hifangaro ve ianao? izy, izaho ooh, volomparasy no loko tiako indrindra, dia mivoaka miboiboika izy, misy zavatra toy ny flare, jereo fa ny siansa dia mifehy ny simia tsara kokoa miandry izay marina tsara huh okay eto no laharana farany ary azonao lazaina amiko raha ekenao na tsy ekena ianao, ka amin'ny farany dia hangina indray izahay hanana FPS satria tsy teo ilay tsiro, efa nihetsika ny kiboko ary eo amboniny dia ilay zava-pisotro miharatra, ilay tsiro mitovy dia somary henjana , saingy fantatrao, ary avy eo ny fahatelo dia tena io solika lalao io, na dia fofona tiako aza ity, Mountain Dew, karazana voasarimakirana fotsiny io lazaiko ilay totohondry og og avy eo dia manana ny laharana voalohany ho solika G. Holazaiko fa tsiro efatra no laharana voalohany fa ny zavatra hafa rehetra rehefa miteny izy fa miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'izy ireo aho, izaho no laharana voalohany paoma maitso laharana faharoa G solika isa telo Bioshock dia tia ny lalao laharana efatra rano fidiovana aotra mba tsy hifanipaka fa mila mandeha aho g fuel fps bioshock dragon respawn lalao mahafinaritra azafady fa mila tsia ny hipetrahanao mandritra ny fotoana filalaovana lalao lava ary hiezaka ny ho tia pop smash no tiako holazaina fa mieritreritra aho, Nianatra zavatra teto isika androany, samy manana ny azy ny tsirairay tsiro, manandrana mifoha ianao, angamba lalao GoPro ho an'ny fanatanjahantena ekolojia na dia amin'ny Mey aza. Nefa na dia mety hahita vehivavy manadio aza ianao, fantatrao fa misy angovo angovo manana angovo be dia be, tena mikorontana amiko ary izaho reraka foana aho taloha, ka tsy ho fakan-tsarimihetsika fotsiny aho
Inona no zava-pisotro tokony hialana amin'ny lanja very?
Izay mijerymampihena lanjatokonyAzaireto karazana manaraka iretozava-pisotro:
Malemy mamyzava-pisotro. Feno kaloria ary ambany otrikaina, mamy, misy gazy karbonikazava-pisotrotoy ny soda tsy manampyfihenan-danja.
Ranom-boankazo sy malamalama. Ny ranom-boankazo dia misy tombony azo avy amin'ny sakafo.
Efa nanandrana nanary lanja ve ianao nefa tsy nahita fahombiazana firy. Raha misy ianao dia tsy ianao irery no hitako fa, amin'ny tranga maro, dia misy sakafo biby fiompy izay mifikitra amin'ny olona fotsiny ary manakana azy ireo tsy hanatratra ny tanjon'ity lahatsoratra ity fa handeha hamaky ireo sakafo 10 ilainao esory raha te hahomby ianao hoy aho. Eric Richardson, dokotera mpitsabo manana fahazoan-dàlana nasionaly te-hiarahaba ny fantsom-pianakaviana Med izay mifantoka amin'ny fanomezana fampahalalana ara-pitsaboana azo ampiharina sy manampy anao sy ny fianakavianao raha heverinao fa misy izany zavatra izany dia mahasoa, alao antoka fa hisoratra anarana, kitiho ny bokotra fampandrenesana ary araho ny unsokay, koa inona avy ireo sakafo mahatonga antsika sahirana, ny tena miady amin'ny famoizana lanja dia zava-dehibe fa kely fotsiny izany Ampahany amin'ny sary tena milatsaka amin'ny fitadiavana fomba hihinana izany dia miasa miaraka aminao sy ny vatanao, fa na inona na inona drafitra fanjarian-tsakafo nofidianao rehefa manandrana mampihena ny lanjanao dia misy sakafo sasany fantatsika fa hampiditra anao amin'ny olana izao.
Ity lisitra ity dia tsy ho feno satria mazava ho azy fa misy sakafo taonina any. Tsy tsara ho anao izy io, fa ireto no sasany amin'ireo fahita matetika mahita olana amin'ireo marary. Ny voalohany dia ny iray amin'ireo lesoka nataoko, dia ireo paty frantsay sy poti-ovy voatahy ary mora tapaka ao amin'ny vatana ary avadika siramamy ary afaka mivadika ho matavy.
Fikarohana marobe no mampiseho fa ny fihinanana french fries sy ovy poti dia misy ifandraisany amin'ny fitomboan'ny lanja, ary ny iray dia naneho fa ny poti-ovy dia mety hitondra anjara biriky avo lenta kokoa noho ny sakafo hafa rehetra, farafaharatsiny manan-danja indrindra rehefa manandrana mampihena ny lanjany, izay mandany zava-pisotro mamy roa izany angamba no laharana voalohany satria mety ho iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra ho anao izay laninay tsy tapaka. Izy ireo dia manana fifandraisana matanjaka amin'ny fitomboan'ny lanja. Ny fandinihana novakiako fotoana lasa izay dia naneho fa ny soda tsy fihinana iray dia mety mahazo kaloria 10 pounds isanandro amin'ny olona antonony ao anatin'ny taona iray, na izany aza tsy fantatry ny ati-dohanao izy io ho sakafo ka tsy mameno anao ary mety ho be loatra amin'ny kaloria ianao ka manaova fitia ary miaraha amin'ny rano mangatsiaka miaraka amin'ny voasarimakirana, izao ny laharana telo dia mofo fotsy ny mofo fotsy dia azo tsakotsakoina. kinova ny Rehefa atao varimbazaha fotsy ny varimbazaha dia esoriny ny ankamaroan'ny fibre sy ny otrikaina izay mahatonga ny voamadinika halevina miadana fa tsy hanova azy ho siramamy haingana ao amin'ny vatana ary mampitombo ny fatran'ny siramamy anao satria tsy dia be ny fibre izay azonao betsaka kokoa dia mety hanana an'io bebe kokoa, noho izany dia hitantsika ny fitomboan'ny insuline anao izay fahavalonao, raha manandrana mamoy lanja ianao rehefa te hihinana mofo Ataovy azo antoka fa mihinana voamadinika sy mbola tazomy kely ny ampahany fa ny fahefatra tsy tokony ho consi akory tia sakafo, fa ho an'ny sasany dia fakam-panahy lehibe izy ireo fa ny bara sôkôla dia tena mahasalama ara-dalàna ary izy ireo dia fifangaroana lafarinina sy menaka voadio siramamy, tsy misy sakafo maro hafa izay afaka manangona kaloria betsaka ho lasa fonosana kely toa anao afaka mahita boaty vatomamy.
Ny zavatra ratsy indrindra amin'izy ireo dia matetika apetraka amin'ny toerana stratejika ao amin'ny magazay ka rehefa mankaleo sy miandry milahatra isika dia eo izy ireo hanohitra izany fakam-panahy izany ary manalavitra azy ireo, raha te handroso ianao tanjona laharana dimy indraindray mamitaka ny sasany amintsika hieritreritra fa mahasalama izany ary ity dia voankazo ranom-boankazo dia fomba tsara hikarakarana ireo manana nify mamy ary amin'ny antonony dia ampahany tena mahasalama amin'ny sakafo izao Ny olana dia rehefa misotro azy isika Toy ny Juice Ny olana voalohany dia ny ankamaroan'ny ranom-boankazo azo alaina ara-barotra dia mbola tsy ranom-boankazo ihany, Ratsy kokoa, fa na dia ranom-boankazo 100 aza, dia mbola hitazona anao ihany io rehefa mitady hahazo lanja very ianao. Ny olana dia rehefa manamboatra ilay ranom-boankazo ianao dia matetika no manary ny pulp, ny fibre, ary ireo zavatra hafa miaraka amin'ny voankazo mihitsy ka mifoka ny siramamy ny vatanao, mampitombo ny insuline anao ary mampitombo lanja anao satria tsy azonao ' t misy ny fanampiny fanampiny Ny fibre dia manamora kokoa ny fihinana kaloria betsaka noho ny vao nihinana ny voankazo Nandalo ny voankazo sy ny vera tamin'ny maraina isa fahenina koa izay mitondra ahy betsaka ary izany no mofomamy mofomamy sy mofomamy misy cafe kafe mofomamy frantsay iray tsy mampino any amin'ny tanànan'ny farihy masinina antsoina hoe Gourmets izay raha sendra eny an-toerana ianao dia aza mijanona satria ho very antoka tokoa ny sakafonao amin'ny sakafo eto amin'ity toerana ity? Mahatalanjona izany, fa raha manandrana mandroso amin'ny dianao mihena ianao, ireo karazan-javatra ireo dia tsy hahatonga anao any amin'izay tianao haleha, feno voninkazo fasika vita amin'ny voamadinika voadio koa izy ireo ary matetika ny menaka tena miditra ny tanjonao Mahazo Mihoatra ny maro ny karazana novidian'ny magazay dia feno tavy trans ihany koa, izay manimba ny kolesterola sy ny aretim-po koa. Iray amin'ireo olana lehibe amin'ireo karazan-tsakafo ireo dia satria be siramamy sy ambany izy ireo amin'ny otrikaina, mety ho noana ianao na ho haingana kokoa aorian'ny fihinananao azy ireo Ny isa fito dia alikaola ary labiera manokana fantatsika rehetra ny kibon'ny labiera ary noho ny antony tsara dia mitovy amin'ny soda na zava-pisotro mamy hafa ny labiera manokana. ny firesahana anio dia hampitombo ny fiorenan'ny siramamy ao anaty anao izay manomboka ny valin'ny insuline ary mitondra izany lanja izany.
Ka raha manandrana mamoy lanja ianao dia mety te hieritreritra ny hampihena ny alikaola, ny fandefasana azy rehetra miaraka amin'ny isa valo dia fahafinaretana meloka iray hafa amiko, fa hitondra anao amin'ny olana haingana izany, halako mihitsy ny miteny azy fa gilasy izany crème, tsy misy toa an'io glasy wl io fa indrisy fa tsy dia mahasalama izany fa be kaloria ary ambany ny siramamy kely dia mety ho tsara indraindray nefa ny olana dia mora ny misakafo betsaka indray miaraka amin'ny fanaovana zavatra toa anao ny gilasy ary ny fampiasana siramamy kely kokoa sy ny akora natoraly bebe kokoa dia afaka manampy azy hanompo ao anaty lovia kely kokoa ary aza mihinana boaty hafa mba hihazonanao ny fandrosoanao ho kely kokoa, ny isa sivy lasa amiko. Sahirana amin'ny zanako aho ary izany no pizza Tianay rehetra silaka pisa, fa be kaloria tokoa ary mazàna vita amin'ny lafarinina voadio sy hena vita, satria mora ny mihinana be loatra dia ny fitambaran'ny gliosida sy ny tavy tsy mahasalama ary izany no mahatonga antsika hanana olana amin'ny safidy tsara kokoa s na indraindray crust cauliflower na crust manify na ataovy ao an-trano misy voam-bary feno sy topping mahasalama kokoa noho izany ny isa 10 farany dia lehibe iray izay mahatonga olona maro ho sahirana raha te hihena ianao dia tokony hisoroka ny Ny fisotroana kafe misy kaloria avo lenta dia tsy namanao iray amin'ireo meloka lehibe indrindra amin'ny menio azy ireo dia ny mochacookie- Crumble Frappuccino ny fisotroany be dia be dia be 590 kaloria, manana tavy 26 grama sy siramamy 76 grama izay tsy manampy anao hahazo ao anaty akanjo milomano tadiavinao, ny karazan-kaloria tsy misy ranoka rehetra dia tsy hanampy anao hahazo ny tanjonao hahatratra izany, ka manalavira ny Starbuckslines. Mitahiry vola be sy kaloria be loatra amin'ny tenanao. Araka ny hitanao amin'ity lisitra ity dia misy zavatra maro itovizany amin'ireo sakafo noresahintsika.
Ireo no sakafo tompon'andraikitra amin'ny areti-mifindra amin'izao fotoana izao, saingy soa ihany fa afaka manalavitra azy ireo ianao - mbola tsy nihinana zavatra toy izany mihitsy aho, saingy tena tsy tokony ho anisan'ny sakafo mahazatra anao izany. Jereo ireo marika. Aza atao sakafo misy siramamy na tavy y manampy an'ireo zavatra voahodina, arakaraka ny ahatongavanao amin'ny sakafo manontolo no mahatsara kokoa ny doso Ankehitriny fantatrao ny 10 amin'ireo sakafo ambony tokony hialana mba hanampiana anao hanary lanja sakafo hafa any izay tokony hialanao Ka ny fanontaniantsika anio dia inona no zavatra sarotra indrindra tokony hafoinao izay mitazona anao tsy hanatratra tanjona kendrena sakafo ara-pahasalamana, ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ary raha hitanao fa mahasoa izany dia makà fotoana hanomezana an'ity lahatsoratra ity dieny izao ary zarao amin'ny namanao izany, hanampy ny fantsontsika hivoatra sy hahatratra olona hafa izay mety mila izany amin'ny fiainany.
Raha mbola tsy nanao an'izany ianao dia aza miala raha tsy misoratra anarana sy mikapoka ny bokotra fampandrenesana sao diso ny atiny ho avy, fa mandra-pahatongan'ny fotoana misy fianakavian'i Dr. richardson ary tsarovy hikarakara ny vatanao satria io irery no anananao
Manampy anao hihena ve ny zava-pisotro misy angovo?
Ny fanisana kaloria no mbola fomba fanao mahazatra indrindra ampiasain'ny olonaverykely nylanja. Misotro iray fl 16 ozafakaan'ny anmisotro angovomisy kaloria 230 midikaianareomila mihinana kaloria 230 kely noho ny zavatra hafa amin'io andro io, na mandoro kaloria 230 fanampiny ao amin'ny gym.29 Okt 2020
Androany te-hiresaka zava-pisotro misy angovo aho, mahasoa ve izany sa ratsy ho antsika, loharanon-kery fanampiny fanampiny ve izy ireo, ahoana ny fomba fiasan'izy ireo ary ny tena zava-dehibe, azo antoka ve izany ho antsika mandritra ny fotoana maharitra, marina izany, marina aho Dr. Ekberg Izaho dia dokotera holistic ary decathlete olympika teo aloha ary raha tena te hifehezana ny fahasalamana amin'ny fahafantarana ny fomba tena fiasan'ny vatana ianao dia alao antoka fa hisoratra anarana amin'ny lakolosy fampandrenesana ianao mba tsy hanadinoanao ny zava-pisotro zava-pisotro misy angovo taona vitsivitsy eny an-tsena dia taona maro ary ny sasany amin'ireo marika malaza na zavatra toa an'i Red Bulland Monster Rockstar Eastroc Hi-Tiger ary avy eo misy ihany koa ny fidiran'ny angovo sasany toy ny angovo 5 ora.
Manana ampihim-bolo eny an-tsena izy ireo, saingy indostria goavambe izany, mitentina 53 miliara dolara isan-taona ny zava-pisotro angovo eran'izao tontolo izao ary mitifitra iraika ambin'ny roapolo eo ho eo ny tifitra angovo ary efa amidy 75 tapitrisa miliara eo ho eo. antsoina hoe zava-pisotro angovo sy tifitra angovo, saingy miasa ve izany ary ahoana no tena fiasan'izy ireo? Ny fahasamihafana misy eo amin'ny zava-pisotro misy alikaola na zava-pisotro misy alikaola dia azo kafeina ary avy eo manana zava-mamy sy kafeina izy ireo, fa amin'ny zava-pisotro angovo dia manampy zavatra maro kokoa izy ireo ka manana ireo zavatra ireo fa ho fanampin'izy ireo dia manana zavatra toa ny guarana taurine ginseng sy Ny kafeinina vitamina B no zava-mahadomelina malaza indrindra eto an-tany izay efa nampiasaina hatrizay ary heverina ho azo antoka amin'ny ankapobeny. Ny fomban'ny asany dia ny fananany mekanika sasany hampiakarana ny metabolisma angovo ao amin'ny ati-doha, nefa miaraka amin'izay dia miteraka vasoconstriction ka misy ra mikoriana ao amin'ny ati-doha, ka mangataka amin'ny ati-doha hiasa bebe kokoa, saingy omentsika kely kokoa angovo, hanaovana izany amin'ny doka kely. Heveriko fa tsara dia tsara izany, fa arakaraky ny ampiasanao azy io na raha ampiasanao azy io loatra izao dia mety manomboka miteraka tsy fifandanjana sy fahasimbana.
Ny kafeinina dia fanentanana amin'ny adin-tsaina ihany koa izay mampitombo ny norepinephrine na adrenaline, ny hormonina miady saina, mampitombo ny fientanentanana sy ny fahamailoana ary izany no antony ampiasantsika azy io amin'ny Voalohany, manaitaitra izany, te-hifoha isika, te-hahatsiaro ho mavitrika isika, mandritra ny mandritra izany fotoana izany dia mampitombo ny tebiteby ary manelingelina ny torimaso. Ireo no zavatra fantatry ny ankamaroan'ny olona ary mbola misotro ny kafe ary ny ankamaroan'ny mponina eran-tany dia mahazo kafeinina isan'andro, fa ohatrinona kosa ny kafeinina amin'ireo zava-pisotro isan-karazany ireo dia afaka ny Coca-Cola dia manana kafeig 36 miligramy ao. Izy io dia can of Mountain Dew manana 55 can Redbull, izay can 8-ons, dia manana ekipa iray kely fotsiny noho ny zava-pisotro malefaka, fa tadidio fa misy can kely, can of Monster iray lehibe kokoa dia manana 16-ounce - Afaka manana kafeina 160 mg ka avo roa heny ny Red Bull, fa avo roa heny ny habeny, tifitra angovo 5 ora dia roa monja ihany, fa feno kafeina 200 mg ary avy eo faha-7 -Eleven Energy Shot tsara tarehy Mitovy amin'izany, saingy 230ml mg ary zava-pisotro misy alikaola antsoina hoe Rockstar xdurance dia misy kafeinina 300mg ary izany koa dia mety lehibe kokoa ihany koa, fa kafe Starbuck mahazatra. Ny kafe lehibe iray, 16 ans no eritreretinao, raha ny marina dia manana 330 mg raha toa ka ny kafeinina, avy eo azontsika atao ny manana ny kafe toa ny efa nolazainay, na dia maro aza izany Ny zava-pisotro misy angovo avy any ivelany dia misy zavatra hafa ankoatry ny kafe: zavamaniry voajanahary misy kafezina Ny gwar amin'ny voa dia eo anelanelan'ny roa sy efatra sy sasany isan-jaton'ny Caffeine raha oharina amin'ny voan-kafe Ny tsaramaso kafe dia tsy voa iray voa iray izay misy 1 ka 2 % Caffeine Soda Guarana dia loharanom-boankazo kafeina voajanahary ihany, izay avo roa heny eo ho eo.
Ka raha manana kafeinina sy garanana izy ireo dia manampy loharanom-kafe samy hafa roa fotsiny ary raha tsy manambara ny kafe avy amin'ny garanana izy ireo, ny zavatra ampiana amin'ny maro amin'izy ireo dia ny taurine ary ny taurine dia asidra amine, be mpampiasa io, iray io fifantohana avo lenta ao amin'ny rafi-pitabatabana afovoany, saingy asidra amine azontsika atao izany. Izy io dia ampahany voajanahary amin'ny vatan'ny vatana ary ny 1/10 an'ny 1% ny lanjan'ny vatanao dia 75 g ka hatramin'ny 3 oz no tena taurine, ka efa azontsika izany, ny taurine dia heverina ho manaitaitra fa tsy misy porofo momba ny fax na ampio izy ireo, ampio fotsiny raha sendra misy ary ny faka faka ginseng dia zavamaniry iray izay heverina ho ahitra efa am-polony taona maro na an'arivony maro ary tena azo antoka fa misy tombontsoa ara-pahasalamana, tsy voatery ho stimulant fa ho adaptogen dia manampy ny vatana manao zavatra sasany Ankoatr'ireo vokatra syntetika izay tena ampiasain'izy ireo dia tena ampiasain'ny ginseng tsara ary ireo zava-pisotro rehetra ireo dia misy zava-mamy voajanahary ary na hampiasa siramamy amin'ny kapoaka kely, dia manomboka amin'ny 25 grama, matetika dia mamy kokoa noho ny zava-pisotro mahery na soda iray kapoaka lehibe Mety hahatratra 70 grama percan siramamy ary raha ambany gliosida na tsy misy siramamy dia soloin'izy ireo amin'ny alàlan'ny zavatra simika simika amin'ny alalàn'ny zava-mamy artifisialy toy ny aspartame na sucralose saccharinor acesulfame potassium a nd araka ny efa noresahiko tamin'ny lahatsoratra hafa, ireo dia neurotoxins miorina amin'ny famonoana bibikely ary misy karazana fahasalamana ara-batana sy olana ara-pitondran-tena miaraka amin'ireo izay mazava ho azy fa miankina amin'ny habetsany rehefa miresaka ireo zavatra ireo, saingy ao amin'ny bokiko, ny siramamy dia iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra eto an-tany ary raha azo atao noho ireo poizina vao haingana ireo dia somary ratsy kokoa hatrany, zavatra iray hafa lasa lasa izy ireo dia manampy vitamina B matetika, fa ny zavatra momba ny vitamina dia ny fanaovan-javatra tsy misy afa-tsy ny mampisy fahasamihafana ihany, raha efa tsy ampy ianao, raha manana vitamina B ilainao ianao dia tsy mihetsika ho loharanon-kery fanampiny na famporisihana fanampiny, toy ny fandokoana rindrina ary tsy mila afa-tsy loko iray azo atao noho ny fananana loko vita amin'ny kapoaka arivo. ity e wand ity dia tsy mahavita zavatra tsara kokoa ary ankoatr'izay, ny vitamina vakianao rehetra dia syntetika, vita amin'ny vongan-katsaka sy siramamy ary taraina arina izy ireo fa tsy ilay otrikaina tadiavin'ny vatana ka ahoana no ataon'ireto singa manampy ireto ankoatry ny asa kafeinina ahoana no fomba fiasan'izy ireo anao, vitanao tsara ve ny zava-drehetra tsy dia be ny fikarohana nataonao momba ny kafezina, fa tsia? betsaka momba ireo zavatra fanampiny misotro zava-pisotro misy angovo ireo, saingy nanao fandalinana jamba indroa tao amin'ny Center College any Kentucky izy ireo ary nampitaha tifitra angovo naharitra 5 ora tamin'ny vondrona iray izay nahazo rano kafe sy vondrona iray izay tsy nahazo rano fotsiny, ary izany dia tsipika roa satria na ny lohahevitra na ny talen'ny fikarohana, ireo talen'ny fandalinana dia tsy nahalala hoe iza no azony, nanao fitsapana fanehoan-kevitra ary avy eo norefesiny ny onjan'ny ati-doha mba hahitana ny fihetsik'izy ireo ary hitany fa manana tsara kokoa izy ireo Raha nanana bebe kokoa izy ireo ny fiasan'ny ati-doha amin'ny kafe kafeina noho ny olona vao nahazo rano, fa raha tsy izany tsy nisy fahasamihafana, okay, tsy misy mahasamihafa ny fisotroana 5 ora sy ny rano kafeinin'izy ireo ary norefesiny fa ahazoanao vola be dia be , dextrins maro, preservatives, sweeteners artifisialy Mba hahazoana potassium acesulfame sucralose, mahazo tsiro voajanahary sy artifisialy ianao ary mahazo nomerao mena 40 sy isa manga iray izay andoavanao vola, ka izany rehetra izany dia zava-pisotro mahery nefa d o manome angovo tokoa ve izy ireo manome izay ilainao? Ny tena angovo ao amin'ny vatana dia antsoina hoe ATP-adenosine triphosphate, io no sandan'ny angovo ao amin'ny vatana ary vokarina ao amin'ny mitochondria. Ny teepee dia vita amin'ny substrate avy amin'ny solika izay manana kaloria antsoina hoe tavy, glucose ary proteinina, fa mba hahazoana angovo avy amin'ireo fisintomana sakafo ireo dia mila vitamina sy mineraly izay miasa ianao.
Izy ireo dia voarohirohy amin'ny fanehoan-kevitra mahatonga azy ireo, anzima, sns. Ary farany, mila Oksizena oksizenina ianao no ampiasainay handoroana ny solika, hanefana ny solika ao anaty sakafo ka ny angovo tena izy dia natao ao amin'ny vatana, fa ianao kosa tsy afaka manao izany amin'ny ora mitovy 24 ora isan'andro satria mandoro ny taova ianao, mila fitsaharana kely izy ireo, noho izany mila torimaso tsara ianao, mila miala sasatra. Na ho may ianao.
Mila fialan-tsasatra kely ianao izao, fa amin'ny fanjakana tsapanao fa tsara ianao, dia manana hery bebe kokoa foana. Araka ny tranonkala iray antsoina hoe caffeineInformer, raha mahatsapa zavatra ratsy ianao dia tokony ho zava-pisotro, ka misy fepetra telo: ny iray dia ny hampitomboana ny angovo, ary misy antony apetrako ireo isa nisaina ireo. singa iray mihoatra ny iray no tokony ho fantatra hampitomboana angovo, ka tsy manisa ny soda kafeinina satria iray ihany ny akora iray hampiakarana angovo, ary avy eo tianay faritana hoe inona ny angovo, izay tian'izy ireo ampitomboina Izay tsy midika hoe tena izy, fa zavatra hitanao fa mitombo ny tanjaka ara-tsaina sy ny fahamailoana ara-tsaina ary eto no ilay kicker tiako fa tsy fanentanana angovo ara-batana fotsiny D, tsy maintsy alaina izany raha manome anao angovo bebe kokoa, avy eo mety. Midika izany fa ny zava-pisotro misy angovo dia tsy manome angovo akory, fa kosa manome anao fahitana ny fitomboan'ny fifantohana, izay midika fa ny zava-pisotro misy angovo dia manaitaitra ary ny stimulant dia fantatra ihany koa ho toy ny zava-mahadomelina, dia zavatra iray izay manova ny toe-tsaina manova ny fisiolojika amin'ny vatana izay mihoatra ny zavatra sasany.
Ka raha misotro angovo misy siramamy ianao izao dia mahazo ilay Sugar Plus manaitaitra ary hiovaova ianao na ny stimulant na ny siramamy ao anaty satria mahatsapa ianao fa tena mahazo angovo avy amin'ny siramamy satria solika nefa fotoana fohy io satria mampiakatra ny fatran'ny siramamy ao anaty ianao ary avy eo lasa sy mikatso rehefa mahazo zava-pisotro misy angovo tsy misy siramamy izao dia azonao ireo neurotoxins ireo avy amin'ireo sweeteners artifisialy ary avy eo mahazo stimulant ianao amin'izany inona no stimulant inona no mahatonga tsara fa heveriko fa be K io, nahasarika ny sainao izany, mampitombo ny fahamailoanao vonjimaika izany mety ho tehamaina ny tarehy ka amin'ity taona ity no mety ho fitaovana ho avy fa tsy zava-pisotro angovo raha manomboka mihintsy ianao dia esory fotsiny ny felatananao mivoaha ny sahan'ny soavaly ary sintomy ny sarety ary tena reraka be izy ary te-hiala izao ary afaka avelanao handeha lavitra kokoa, saingy azoko antoka fa manaiky ianao fa tsy hampiakatra ny vintana fa ity hors e hanao asa tsara kokoa amin'ny ho avy izay tsy hanatsara ny fahasalamana, afaka mahazo fanentanana kely amin'ity soavaly ity vetivety ianao, fa amin'ny fotoana maharitra dia tsy hihatsara kokoa izany, fa ny sariko tiako indrindra amin'ny fisotroana angovo na zavatra hafa toa izany dia carte de crédit satria ny carte de crédit dia manome anao ny eritreritra hanana fananana vola, toy ny angovo misotro manome anao ny fiheverana fa manana angovo ianao, tsy dia tena mampisy angovo bebe kokoa amin'izany fotoana izany, manontania tena hoe, afaka mampiasa carte de crédit hiteraka fahasalamana ara-bola, afaka mihatsara ve ianao? Ny fitantanam-bola, arakaraka ny fampiasanao ny carte de crédit anao no mahasarotra ny famerenam-bola ary raha tsy mahasoa anao izany dia mindrana raha tsy manome vola anao dia mindrana vola raha tsy manome angovo anao na fahasalamana raha manana angovo ianao ary manohy ny fahasalamanao, dia tadidio fa amin'ny zava-pisotro misy alikaola dia tsy maintsy aloanao ny vola nindraminao ary arakaraky ny ampiasanao azy no mahalavo anao, dia vao mainka ho sarotra ny hamerina io angovo eritreretinao io. Tsy mbola nahatsikaritra zava-pisotro nisotro zava-pisotro an-taonany maro aho, izany dia satria tsy azontsika hoe inona ny fahasalamana Tsy azontsika ny fisorohana ny aretim-po diabeta adrenalie havizanana aretina autoimmune aretina dementia Al Zheimer ny aretina maharitra am-polo taonany, izy ireo ' Tsy hitranga izao hariva izao fa tsy hoe misotro ianao ary mahazo dementia dia ho mora izany dia ho hitantsika ao am-po fa rehefa manararaotra ny vatanao ianao dia vao mainka misotro zava-pisotro misy angovo ary mindrana angovo vao may mandrehitra labozia. samy mifarana ary tsy maintsy takatsika indray mandeha fa ny tsy fahampian'ny soritr'aretina dia tsy fahasalamana ny tsy fahampian'ny soritr'aretina dia tsy ny soritr'aretina, noho izany raha fintinina, ny zava-pisotro angovo dia tena lafo loatra, ny soda dia manodidina ny ampahefatry $ 0,25 omeo na raiso, arakaraka ny marika vs. $ 22 ho an'ny iray amin'ireo zava-pisotro misy alikaola / otrikaina be voninahitra, izay samy tsy manome ny angovo.
Ny soso-kevitro dia ny hitazomana ny stimulants ambany indrindra araka izay azo atao amin'ny fotoana tianao hampirisihana ny tenanao - manàna iray na roa - aza manana 8 na 12, ary ny momba ny zava-pisotro misy angovo - tsy mbola nanana iray aho - tokony tsy ' t ataovy foana ny zavatra rehetra farafaharatsiny mba manandrama tsia raha tianao ity lahatsoratra ity dia azoko antoka fa ho tianao ity, misaotra nijery, hahita anao amin'ny lahatsoratra manaraka aho
Manome anao volo ve ny Gfuel?
Dr Tsy fanajanaG-solikaizany sitrapo izanymanome anaofivalanana maitso mavana. RAHAianareomaniry hatranyianareomety ho toy ny malaza Twitch streamer Dr Disrespect,G Solikamananaianareosarona. Ary koa,ianareomety hivalana maitso mavana.15 Jul. Desambra 2019
Fa maninona no ratsy aminao ny Gfuel?
G Solikavoalaza fa misy mihoatra noho ny 'seranana azo antoka' isan'andro ny firaka, izay fantatra fa miteraka homamiadana sy fahaterahana ary koa fahavoazana hafa amin'ny fiterahana. Raha ny lalàna mifehy ny fanjakana any California dia tsy misy ambaratonga fampahalalana fantatra fa azo antoka, indrindra ny ankizy.6 feb 2018
Fa maninona no ratsy ny Gfuel?
Koa satria mampiankin-doha ny kafeinina dia tokony holaninao amin'ny antonony izany. Na dia tsy misy siramamy aza,G FIASAmbola misy mamy. Mbola tsy azo antoka ny tena fiantraikan'ireto zava-mamy ireto. Ny sasany amin'ireo akora hafa dia mety hiteraka risika ara-pahasalamana ihany koa raha tsy mahazaka diabeta na insuline ianao.28 desambra 2020
Mety ve ny misotro Gfuel isan'andro?
Na dia manome toky anao haingana aza izy ireo, dia mety manontany tena ianao raha izanyazo sotroina tsara G Guel isan'androary tsy mahazo voka-dratsy. Raha ny marina, raha mbola tsy mihoa-pampana ianao ary manefy henjana ny fanjifana kafeinanao amin'ny ankapobenyG Solika isan'androtsy mampidi-doza ary mety hahasoa anao mihitsy aza.10 des 2020
Fa maninona no maimbo Gfuel?
Voalaza izayfofonaMety ho avy amin'ny fofonainao ihany koa rehefa misotro eo am-baravarana, mety ho ara-drariny ny fitambaran'ny vovokamaimbona ny rano ampiasainao (izany hoe ny fanadiovana azy) dia mety hiteraka afofona.
Fa maninona no mahasasatra ahy ny Gfuel?
Adenosine no manampy antsika hahatsapate hatory. Noho izany, rehefa miraikitra amin'ireo mpandray mpandray adenosine ny kafeinina dia manakana ny ati-dohantsika tsy hahatsapa izanyRERAKA. Rehefa maty tsy azo ihodivirana ny kafe kafe dia tavela amina fananganana adenosine ianao izaymanaovao mainka ianao mahatsapaRERAKA. '31 Aogositra 2020
Mila misotro G Fuel ve ianao mba hihena?
Aza mitady handany zavatra mihitsy ho fomba iray hampihena ny lanja. Ny lakilen'ny fahaverezana lanja dia mihinana kely foana ary manao fanatanjahan-tena bebe kokoa (ny fanatanjahan-tena dia tsy zava-dehibe amin'ny fihenan-danja fa amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny). Rehefa jerena ny zava-misy ara-tsakafo ho an'ny G-Fuel dia hita fa misy kinova maimaimpoana sy kinova misy siramamy.
Inona no ataon'ny rafi-angovo G?
The G Fuel Energy Formula dia famenon-tsarimihetsika izay noforonin'i Gamma Labs hampitomboana ny fotoana ifantohana sy hamaliana ho an'ireo mpilalao. Manana siramamy 0 grama, kafeina 140 mg, ary fifangaroana manan-kery ho an'ny angovo, fifantohana ary antioxidant.
Misy olana ara-pahasalamana amin'ny G Fuel?
Mampalahelo fa zava-pisotro misy angovo maro no feno siramamy, simika ary additives, ka miteraka olana ara-pahasalamana. Gamma Labs dia nanambara fa izany no antony nanaovan'izy ireo ny G Fuel ho voajanahary ary tsy misy akora simika na additives. Io dia miorina amin'ny rano sy tsy misy siramamy ary milaza fa manome anao angovo mandritra ny andro. Afaka mihinana an'io zava-pisotro io na iza na iza.